The Windows 10 barbar haingori nzvimbo yekuona maapps ako. Nehurombo, vazhinji vevashandisi vePC vanoshandisa ibha rekuvhura mabasa, kuvhurika Tanga menu nekudzvanya pane bhatani rekutanga, uye kutarisa zuva nenguva.
Iyo yebasa inzvimbo ine simba. Unogona kuita kuti zvinyatsoita nani nekutepeta mapurogiramu aunofarira, uchifambisa kabhata kekukomberedza kupinza mawebhusaiti kubhodhi yebasa, kupinza zvinhu ku ronga zvinyorwa, Uye zvakawanda.
Unogona kunge uchiziva izvozvo Windows 10 inokubvumira kuti utore mapurogiramu uye mapurogiramu kubhodhi yebasa kuti uwane nyore. Nekudaro, Windows 10 haitenderi kuti utore mafolda uye mafaera kubhodhi yebasa.
Tatove takavhara sei kupinza mafirita kune Windows 10 barbar. Isu tinoshandisa chinyorwa ichi kugovana kunyina chero faira kuenda Windows 10 basa. Semuenzaniso, unogona kunyora iro rakakosha Shoko gwaro kana yako yaunofarira vhidhiyo kubatera rekuita.
Sezvakataurwa, Windows 10 haitsigire kupinza mafaera kubhaa yebasa. Asi sezvaungadaro iwe uchiziva, inotsigira kupinimidza executable kune yebasa rebasa. Tichishandisa rutsigiro urwu, tauya neanoshanda kuti tipe chero faira kuenda Windows 10 barbarita.
Pin chero faira kuti Windows 10 barbar
CHERECHEDZA: Mugwaro iri, tiri kupinza Gwaro gwaro (.docx) kubhaa yebasa. Nekudaro, iwe unokwanisa kuisa chero faira kune Windows 10 taskbar nekutevera yakapihwa pazasi workaround.
Step 1: Vhura iyo File Explorer uye enda kune iyo folda ine iyo faira yaunoda kuisa pini kubasa. Kana iyo faira iri pane desktop, enda kune iyo desktop desktop uchishandisa File Explorer.
Step 2: Baya maonero tabu uye wobva wadzvanya Faira zita rekuwedzera cheki bhokisi kuti uite Faira Explorer ratidza mazita faira mazita newedzerwa.
Step 3: Iye zvino, renemazve kuwedzerwa kwefaira (iyo faira raunoda kuisa pini kubhaa) ONA. Usati waita izvi, ndapota tarisa pasi yekutanga faira yekuwedzera sezvatinoda iyo.
Semuenzaniso, tiri kunyora zita zvakare IW.docx faira IW.exe ikwidzwe.
Paunoona gwaro rekusimbisa, tora Ehe bhatani kuti utore zita racho faira.
Step 4: Zvino, dhonza uye udonhedze iyo faira pane webasa rebhokisi kuti riinze pabhodhi yebasa. Kwete, iwe haugone kuvhura iyo faira ikozvino.
Step 5: Enda kumashure kune dhairekodhi rine iyo faira iyo iwe uchangobva kuisa padhibhi yebasa. Tumidza zita rewedzerwa kudzokere pakuwedzerwa kwekutanga. Mune ino kesi, tiri kunyora zita zvakare IW.exe Dzokera ku IW.docx ikwidzwe.
Click Ehe bhatani paunoona gwaro rekusimbisa.
Step 6: Kungofa pane iyo faira iyo iwe uchangopinikiza kubatari yebasa kuti uone yayo yekusvetuka runyorwa.
Step 7: Mune runyorwa rwekusvetuka, kurudyi pazita refaira wobva wadzvanya Properties. Sezvauri kuona pazasi, iro zita refaira rinongotarisana pamusoro Unpin kubva kune taskbar sarudzo.
Step 8: pasi yokudimbudzira tab, in the chipfuro chikamu, recha iro renhedhiyo faira kudzokera kune yekutanga. Zvekare, mumuenzaniso uyu, tiri kunyora zita rewedzerwa faira kudzoka .docx kubva .exe ikwidzwe.
Click Shandisa bhatani. Ndizvo! Iwe unogona ikozvino tinya pane iyo faira yakanyorerwa kubhodhi yebasa kuti uvhure pamwe neiyo default chirongwa.
Chinja rakapetwa faira rebasa icon
Kana iwe uchida kushandura icon yefaira pane barbar yebasa, ndapota tevera nhanho mbiri idzi.
Step 1: Kungofa pane iyo faira icon pane webasa kuti uone iyo yekusvetuka runyorwa. Kungofa pazita refaira wobva wadzvanya Properties.
Step 2: pasi yokudimbudzira tab, kanda Shandura icon bhatani. Bhurawuza kune iyo icon faira kana kushandisa imwe yeiyo huripo system icons. Dzvanya OK. Click Shandisa.
Tangidza iyo File Explorer kana kutangazve PC yako kamwe kuti uone ichatsva.
Pinda Google, YouTube, uye Gmail To Windows 10 Taskbar
Microsoft inosunungura Windows 11 Vaka 22000.120 neshanduko ku File Explorer
Rongedza: OneDrive Icon Inoshaya Kubva Windows 10 Taskbar
Gadzirisa: File Explorer Haisi Kushanda Mune Windows 10
Rongedza: SD Card Kwete Show Up In Windows 10 Faira Explorer